FTTH (Fiber To The Home) ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ... - MYSTERY ZILLION
FTTH (Fiber To The Home) ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ...
May 2010 edited September 2010 in ဖတ်စရာ
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ လက်ရှိ လူပြော အများဆုံး ဆက်သွယ်ရေး စနစ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FTTH (Fiber To The Home) စနစ်အကြောင်းကို သိသလောက် လေး ၀င်ပြောကြည့် မယ်ဗျာ ... ပြင်ဦးလွင်နဲ့ Mandalayကတော့ သုံးလို့ ရနေပြီလို့ပြောတာပါပဲ .. ရန်ကုန်ကတော့ မကြာမီ .. လာမည် .. လို့တော့ ပြောပါတယ်.... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အင်တာနက် စနစ်တွေ ထက် မြန်နှုန်းမြင့် စနစ် တစ်ခုပါ .. စရိတ်လဲ သက်သာပါတယ် .. အဲဒီ စနစ် စတင်ပြီလို့ ကြားတော့ ကျနော် လဲ ဘယ်လိုများလဲ သိချင်တာနဲ့ စာတွေ လိုက်ရှာပြီး ဖတ်လိုက်ရတာဗျာ ..
Fiber To The Home ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရ စကားလုံး ဟာ .. FTTx ဆိုတဲ့ စကားကနေတဆင့် ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ...
FTTx ဆိုတဲ့ နေရာမှာ
1. Fiber to the home
2. Fiber to the premise
3. Fiber to the node
4. Fiber to the curb ... အစရှိ သဖြင့် အများအပြား ရှိတဲ့ အထဲက သုံးစွဲသူတွေ ရဲ့ နေအိမ်ကို ပေးတဲ့ စနစ်မို့လို့ FTTH ဆိုပြီး ခေတ်စားလာတာဖြစ်ပါတယ် ...
ပြောရမယ်ဆိုရင် FTTH Service Provider ကနေပြီး မြောက်များစွာသော ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ဗဟို ထိန်းချုပ်မှုနေရာ တစ်ခုထည်းကနေပြီး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ် .. CO (Central Office) သို့မဟုတ် PoP (Point of Presence) လို့ခေါ်ပါတယ် .. မြောက်များစွာသော ၀န်ဆောင်မှု တွေလို့ ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာ ..VOIP, Lifeline POTS, RF Video, MPEG Video, IPTV, HDTV, Video on demand, High Speed Internet .. အစရှိတဲ့ Services တော်တော်များများ ပါ၀င်နေပါတယ် .. လက်ရှိမှာ တော့ ကျနော်တို့ကို IPTV, VOIP, Internet ဆိုတဲ့ သုံးမျိုး ကိုပဲ ၀န်ဆောင်မှု ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ် .. FTTH ကို Triple Play Services လို့လဲခေါ်ပါတယ် .. (Voice, Video, Data) ..
FTTH ရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်အရဆိုရင် .. CO or PoP က အဓိက ပါ၀င်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် .. CO မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Interfaces တွေက ATM, Ethernet Switch, Router and GIR-300(PSTN) Gateway တွေကို ကြိုတင် ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ထားပါတယ် .....
CO ကပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Services တွေရဲ့ Electrical Signals Form တွေကို Optical Pulses တွေ အဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုမဲ့ Subscriber Home တွေ ဆီကို မရောက်ခင်မှာ ပဲ ODN (Optical Distribution Network) အပိုင်းကနေပြီးတော့ ထုတ်လွှင့်မှု မပြုခင် ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ် .. ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အချက်အလက် တွေအားလုံး သည် .. Fiber Cable မှ တဆင့် သယ်သူသွားရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် .. Fiber Cable နားလည်နိုင်တဲ့ ဘာသာ စကား အဖြစ်အရင် ပြောင်းလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ ..
အသုံးပြုသူတွေရဲ့ နေအိမ် (Subscriber Home) ကို ရောက်တဲ့ အခါမှာ ကြားခံ စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CPE (Customer Premises Equipment) တွေက နေပြီး Fiber ကသယ်ဆောင်လာတဲ့ CO က ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ Optical Pulses တွေကို Electrical Signals တွေ အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ပြီး Users တွေ လိုချင်တဲ့ Data, Voice, Video Services တွေ အဖြစ် အဆင်သင့် ဖြစ်သွားစေပါတယ် ....
ကျနော် စောစောက ပြောသွားတဲ့ ODN (Optical Distribution Network) ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ .. ရှင်းရှင်းပြောရင် ... FTTH မှာ သုံးမျိုး အဓိက ရှိတယ် ဗျ .. သုံးမျိုးထဲမှာ မှာ လက်ရှိ ကျနော်တို့နိုင်ငံ မှာ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ FTTH ကတော့ အောက်ပါထဲ ကနောက်ဆုံး အမျိုး အစားလို့ပဲ ကျနော် ထင်တယ်ဗျ .. ထင်တာနော် ..
1. Home Run Fiber (Point to Point)
2. Active Star Ethernet (Point to Point)
3. Passive Optical Network /PON (Point to Multi-point) ...
1. Home Run Fiber .. မှာ Dedicated Fiber Line သည် အိမ် တစ်အိမ် အတွက် Dedicated Line တစ်လိုင်း ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး .. CO မှ အိမ် ဆယ်အိမ်ဆိုပါ က ဆယ်လိုင်း ထွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အိမ်တစ်အိမ်ကို တစ်လိုင်း ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ နှုန်း အရဆိုရင် စျေးနှုန်း အရလဲ မေးစရာ မလိုအောင် ကြီးမြှင့်သွားပါလိမ့်မယ် .. ဒါပေမဲ့ High Speed Bandwidth နဲ့ Connection အတွက်ကတော့ မေးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ .. အောက် က အတိုင်း ကြည့်လိုက်ပါ .. နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ .. လက်ရှိ ဒီစနစ်က ကျနော်တို့ ဆီမှာ Government တွေလောက်ပဲ သုံးတဲ့ စနစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..
2. Active Star Ethernet ... CO ရဲ့ Dedicated Fiber Line ကနေပြီးတော့ Subscriber Home တွေဆီကို Remote Access Node တွေက တဆင့် ပြန်ခွဲပါတယ် .. CO ကနေ ပြီး Remote Access Node တွေ သုံးခုရှိရင် Dedicated Line သုံးလိုင်းပဲ ထွက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် .. Remote Access Node တွေက CO မှ ရလာတဲ့ Dedicate Fiber Line တွေကို Subscriber Home တွေဆီ ပြန်ခွဲ ပါလိမ့်မယ် .. DLC (Digital Loop Carrier) or BLC (Broadband Loop Carrier) လို့လဲ ခေါ်ဆိုပါတယ် ...
3. Passive Optical Network (PON) ... ကတော့ FTTH စနစ် သုံးမျိုးထဲမှာ ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံးလို့ ပြောရင်ရပါတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသုံးပြုတဲ့ Components တွေနဲ ပြင်ဆင်မှု စရိတ် သက်သာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ...
အားသာချက်ကတော့ .. Home Run Fiber နဲ့ Active Star Ethernet FTTH System တွေက CO မှ အကွာ အေ၀း 80 Km ထိရှိလို့ အားသာချက် ရှိပါတယ် .. PON စနစ်ကတော့ .. 20 Km ပဲရပါတယ် ... ဒီတစ်နေ့တော့ ဒီလောက်ပေါ့ဗျာ .. နောက်နေ့မှ PON System အကြောင်း အသေးစိတ်လေး ဆက်ရေးပါ့မယ် .. အိပ်ပီဗျာ .. အားလုံးပဲ ကောင်း သော ညပါ ..
PS : သိသလောက် ၀င်ရောက်ရေးသားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် .. လိုအပ်ချက်များရှိရင် ဖြည့်စွက်ပေးပါဗျာ ..
pls visit my home http://mohpha.co.cc
အခုလို အသိပညာကို ဖြန့်ေ၀ပေးတဲ့အတွက် aikhtut ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..
ရန်ကုန်မှာတော့ လာမယ်ကြာမယ် သဘောရှိပါတယ် ... အရင် ADSL တို့ WiMax တို့
ထက် စျေးနှုန်းက သက်သာနေတော့ ရန်ကုန်ချပေးဖို့က ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူး ထင်ပါတယ်.
နောက်လည်း အသိပညာလေးတွေ ဖြန့်ေ၀ပေးစေလိုပါတယ်... :cool:
@ Nay Lay
FTTH ကို ရန်ကုန်မှာချထားပေးဖို့ လျှောက်လွှာတွေ လက်ခံနေပါပြီ... အနာဂတ်က လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာပဲ ရှိတော့တာပါ..
ဘယ်မှာလျှောက်လို့ရပါသလဲ။ တစ်ချက်လောက် ပြန်ပြောပေးပါ
မန်းမှာ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့သေးပါ။
Wimax တွေ အသေအလဲပြန်ချပေးနေပြန်ပါပြီး။
စျေးကြီးတာ ရောင်တာအားရမှ လာပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ် ကို Gispy ...
ကျွန်တော့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောပြတာ ... ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မမေးမိလိုက်ဘူးကော? သူ့ကိုထပ်တွေ့ရင် မေးပေးပါ့မယ်..
အစ်ကိုရေ .. .အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သတ်တာ Posts တင်ထားပါတယ်.. ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဖုန်းကို ထောင်ဂဏာန်းလောက်နဲ့ သုံးနိုုင်တဲ့ခေတ်မှာ ဒီမှာက ၅ သိန်းဖုန်းကို အလုအယက်...
တခြားနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် ဘန်း၀စ်ဒ် ကျယ်ကျယ်... နှုန်းမြန်မြန်နဲ့ သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီမှာက ၁၀ သိန်းကျောင်ပေးပြီး လိပ်နဲ့ ပြိုင်တဲ့ကွန်နက်ရှင်...
အဲ့ဒါ တခြားနိုင်ငံမှာလေ...... :cool::cool::cool::cool: